Mgbanwe ihu igwe na-emetụta ọmụmụ nke coral | Netwọk Mgbasa Ozi
Mgbanwe ihu igwe na-emetụta ọmụmụ nke coral
Mgbanwe ihu igwe na-akpata mbibi nke ahihia coral. Otu n'ime mmetụta nke coral nwere na nzaghachi maka nrụgide nke mmụba nke oke okpomọkụ dị n'ọhịa bụ ịcha ọcha.
Cha ọcha ọ na - agwụ na-egbu coral ma si otú a mebie usoro obibi nke gburugburu ebe obibi n'ihi na ụdị niile nke dabere na coral enweghị ebe obibi. Achọpụtakwara ịcha ọcha iji belata ọmụmụ nke coral. Na Nnukwu Osimiri Australia Edere akụkụ buru ibu ebe ha tara ahụhụ na-acha ọcha ọcha.
Coral nwere ụzọ mara mma nke mmeputakwa. A na-akpọ ya n'okpuru mmiri ozuzo snowstorm. Nke a bụ n'ihi na kwa afọ, coral na - arụkọ ọrụ iji chụpụ ọtụtụ ijeri àkwá na spam. Ihe omume a na - eme ka polyps nke coral na-awagharị mgbe a na - akụghasị na mgbe ha rutere, ha nwere ike ịrapara na akuku mmiri na - enyere ya aka itolite ma wughachi nke nta nke nta.
N'afọ a, ihe omuma a maara nke ọma emebeghị na ike ya niile n'ihi mmetụta nke mgbanwe ihu igwe. Site na ịcha ọcha, ọtụtụ mmiri mmiri na-emetụta nke ukwuu na ọtụtụ ndị ọzọ nwere nsogbu nsogbu n'afọ a. Lecha ọcha emetụtawo ọmụmụ nke coral ndị lanarịrị. Enweghi onyinye nke ndi mmadu ohuru na akuku mmiri, o na - adi mfe ma dikwa nfe ibibi.
Nnukwu Ihe Mgbochi, nke ya na ọ dị kilomita 2.300 n’ogologo Ọ bụ usoro coral kachasị ukwuu n'ụwa na UNESCO World Heritage Site, ọ na-eche nsogbu kachasị njọ nke ịcha ọcha nke coral n'ihi mmụ ọkụ nke mmiri mpaghara ahụ.
Iji belata mmetụta a na mbibi nke coral, a ga-ebelata ikuku carbon. Na Nkwekọrịta Paris Ezubere ya iji belata ikuku gas na-ekpo ọkụ ma nwee olile anya, n'ụzọ dị otú a, enwere ike ịkwụsị ịcha ọcha nke coral.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Mgbanwe ihu igwe » Mgbanwe ihu igwe na-emetụta ọmụmụ nke coral
Ala ọmajiji siri ike 6,9 mere ka Fukushima maa jijiji